Waa maxay ogolaanshaha? – Help Center
Ogolaanshaha waa heshiis u dhaxeeyo adiga iyo dadka kale ee qeexayo waxa aad rabtid inaad wada sameysaan. Waan ku dhaqmi karnaa ogolaanshaha nolol maalmeedkeena, haddii aan weydiineyno shaqaalaha cusub haddii ay ku qanacsanyihiin in la hab siiyo ama aan u sheegeyno qof aan kula kulanay abka Grindr waxa aan ku qanacsannahay ee galmo ahaan.
Markii ay timaado xiriirada galmada, ogolaanshaha wuxuu hubiyaa in qof walba helaa waxa ay rabaan iyaga oo aan la dhibaateyn. Ogolaanshaha wuxuu ku saabsanyahay xiriir furan, oo wuxuu dhacaa labo qaabab: oo lagu helayo laguna bixinayo ogolaansho.
Helitaanka ogolaansho waxaa laga wadaa helida xaqiijin cad, oo xamaasad leh in lamaanahaaga badbaado dareemo, la xaqiijiyay, oo u raaxeysanayo nafsadooda. Tani waxaa lagu gaari karaa dhoor wado, oo ay ku jiraan su’aalo weydiinta (“Ma kaa siibi karaa shaarkaaga…”) iyo soo jeedino sameynta (“waxaan jeclaa inaan ku shumiyo, taasi caadi miyaa?”). La hubinta lamaanahaaga iyo helida ogolaanshahooda waxay hubineysaa inaad garaneysid oo aad ixtiraameysid xaduudaha midba midka kale.
Ogolaansho bixinta waxaa laga wadaa ogeysiinta lamaanahaaga inaad raaxeysaneysid oo aad caadi ku tahay wax walba oo dhacayo. Waxaad ogolaansho ku bixin kartaa xaqiijinta hadalka ah sida “haa” sidoo kale sida tilmaamaha aan hadalka aheyn oo tilmaanta raaxada oo aad ku ogeysiineysid lamaanahaaga inaad yeelaneysid waayo aragnimo wanaagsan.
Waa muhiim in la xasuusto in ogolaanshaha marwalba laga laaban karaa. Weligaa wax ma ugu tiri qof abka Grindr oo aad dareentay si ka duwan markii aad qof ahaan ula kulantay? Waad badeli kartaa maskaxdaada ee ku saabsan waxa aad rabtid inaad sameysid xili walba. Sababtoo ah waxaad ogolaansho ku bixin kartaa wax abka Grindr micnaheeda ma ahan in ay waajib kugu tahay inaad sameysid midaas markii aad kulantaan. Dhammaadka maalinta, adiga iyo lamaanahaaga waxaad u qalantaan inaad ixtiraam dareentin oo aad raaxo ku dareentin wax walba oo aad wada sameyneysin.
Ka fiiri fiidiyahaan Waalidnimada La qorsheeyay si aad wax badan uga baratid ogolaanshaha. Liiskaan ka socdo Teen Vogue wuxuu leeyahay tusaalooyinka ee sida loo xiriiro markii ay timaado ogolaansho. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)